Askari ka mid ahaa ilaalada Gaarka ah ee Cumar Filish oo Muqdisho lagu dilay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Askari ka mid ahaa ilaalada Gaarka ah ee Cumar Filish oo Muqdisho lagu dilay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Waxaa magaalada Muqdisho goor dhoweyd lagu dilay mid ka mida ilaalada gaarka ah ee Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud (Cumar Filish).
Waxa toogasho lagu dilay Xuseen Abuukar Nuur oo ka mid ah Ilaalada gaarka ah ee Guddoomiye Cumar Fiish, waxaana dilka oo ka dhacay Iridka Dekadda weyn ee Muqdisho la sheegay inuu geystay askari Boolis ah.
Wararka ayaa sheegaya inay ciidamada Amniga baarayaan sida dilku u dhacay iyo sababta dhalisay, waxaana arrinta la wareegay ciidamada Booliska, waxaana meydka askariga la dilay la geeyay xarunta CID-da e.
Previous article24 ka mida Culimada Somaliland oo Baaq Culus kasoo saaray Xiisadda ka taagan Doorashada
Next articleHanti-dhowrka oo baaritaan ku bilaabay Wasiirkii Arrimaha Dibadda ee shaqada laga joojiyey